Siyavuyiswa ngabathandi beembongo kunye neprose-enhle, emfutshane neyantlekisayo - NgoFebruwari 14 kunye nesibhiyozo semibutho, sivuyisana nezibini
Okunye Ieholide NgoFebruwari 14
Siyavuyisana nabathandi beembongo kunye neprose-enhle, emfutshane kwaye ehlekisayo. Ndiyakuvuyisana ngabalingani abathandanayo ngoFebhuwari 14 nangomhla wokuziwayo - imifanekiso kunye neSMS
Ngomhla obandayo ngoFebruwari 14, imiphefumlo kunye neentliziyo zothando zitshatileyo zifudumala iimvakalelo zabo. Njengamakhulu eminyaka edlulileyo, amakhwenkwe namantombazana, amadoda kunye nabafazi batshintsha ama-valentines amnandi ngokuvuma ngokunyanisekileyo. Kule phepha siye saqokelela ukunyanzela ngakumbi abathandi Usuku lwe-Valentine . Le mibongo emangalisayo ngothando, kwaye iigent valentines kunye nemifanekiso ehlekisayo ebonisa izitya, iintliziyo kunye ne-candy e-sweet, kunye ne-SMS emfutshane ngothando lokuvuma abafana kunye namantombazana. Kwabo basoloko benamahloni ukuthetha ngeemvakalelo zabo kakuhle, sinika ukhetho oluvuyokileyo ngomhla wezithandwa zonke kwiprose. Funda, khumbula izibongo kunye namazwi okunyanisekileyo, bhala phantsi iimibhalo zemiyalezo emfutshane yefowuni kumabini abathandanayo. NgoFebruwari 14 luyimini ekhethekileyo yabaninzi. Zama ukukukhumbula njengesiqingatha sakho esihle.
Okumnandi kukuthandana kubathandi bevesi - Imiba emangalisayo yemibongo yeenkondlo zakudala ngokuthanda nokunyaniseka
Ukuhalalisana ngolunye usuku kwiSonto likaValentine, izibini zingatshintshana zivuyisana kakhulu - iingqungquthela malunga nothando, oluphakathi kweepeniti yezimbongi ezingabhubhi. Iinqununu zasePushkin, i-Yesenin, iLermontov, i-Akhmatova, ebhaliweyo kwiminyaka emininzi edlulileyo, isingqungquthela samanje namhlanje. Nangona intanda yakho isuke iphosa malunga ne-rap, akayi kuhlala engathandabuzeki kwimigca malunga nothando, eyadalwa ngokubakho ngumbongo wezinye ii-eras. Amaxesha atshintsha, kodwa iimvakalelo ezithandana nezibini ezithandanayo zihlala zithenda kwaye zithandana. Ungabhala kwakhona imigca malunga nothando lweetekisi ezivela kwikhasi lethu okanye ukuvuselela imemori yakho, ukukhumbula imibongo emihle kaBlok, uTurgenev, Tsvetaeva ... Sinawe kuphela ama-echoes kuphela: Uthobile kwaye ndiya kuthula. Sasidla ngokuzithoba kwi-wax. Sizinikele kwi-ray ebulalayo. Le mvakalelo yesifo esihle kakhulu Imiphefumlo yethu iyathuthunyiswa yatshiswa. Yingakho uvakalelwa ngumhlobo. Ngamanye amaxesha ndivakalelwa gqitha. Kuya kubakho ukukrakra ngokukhawuleza, kwaye ukukhathala kuya kuba lusizi. Ingosizi kungekhona amagama, kholwani, kwaye ningaboni, - Kuphela iimfihlelo zelahleko ezilahlekileyo! Ukusuka kuwe, ukhathaza i-anatomist, ndafunda ububi obuhle kakhulu. Kungenxa yoko uvakalelwa kukuba ungumzalwana. UMnu Tsvetaeva
Ndiyakhumbula elinye ixesha! Ngamaphupha amnandi ngamanye amaxesha ndibambe iqhina elonwabileyo ... kwaye ndiziva umlenze ezandleni zam; Kwakhona, ingcamango iyabilisa, kwakhona kwakhona, ingcambu yayo Ishushu egazini yegazi, Iphinde ibuhlungu, iphinde ithande! .. A. Pushkin
Ngeziqhamo, ngezenzo, ngokuzuko ndilibale phezu komhlaba osikiweyo, Xa ubuso bakho kwisakhelo esilula Ngaphambi kokuba ndikhanyise etafileni. Kodwa ilixa lifikile, kwaye ushiye ekhaya. Ndaphonsa indandatho ebusuku. Wanikela isiphephelo sakho kwelinye, Ndalibala ubuso obuhle. Iintsuku zihamba ngeenyawo, zijikeleza nge-swarm cursed ... Iwayini kunye nokutshutshiswa kwam buhlungu ubomi bam ... Ndaye ndakukhumbula ngaphambi kwe-analo, Kwaye ndakubiza njengobutsha bam ... Ndakubiza, kodwa akazange ukhangele ngasemva, ndandilila, kodwa awuzange udibezele. Uyifake ngengubo eluhlaza okwesibhakabhaka ngokubuhlungu, Ngobusuku obumanzi, ushiye indlu. Andiyazi apho iqhosha lakho likhuselekile Wena, mzalwana, uyifumene, ndithenda, ndilala kakuhle, ndiyaphupha, ingubo yakho eluhlaza okwesibhakabhaka, apho uhamba khona ngobusuku obumanzi ... Musa ukulibala, ? Ubuso bakho kwisimo sakhe esilula ndasusa isandla sam etafileni. A. Blok
Ukuvuyiswa ngokunyanisekileyo kwizibini ezithandwayo-ngeprose kunye ngamazwi abo - Iimpawu ezihle zothando malunga noFebruwari 14
Ukuvuyela imibhangqwana ngoFebruwari 14, ngamanye amaxesha akufanelekanga ukukhangela izibongo ezifanelekileyo zeholide, imizila ekhethekileyo malunga neSuku lweValentine, iimvumi zeebongozi ezidumileyo kunye namanamhlanje. Ngamanye amaxesha kunokwaneleyo nje ukuthetha amagama aqinisekileyo kwintetho kumntu nomfazi abathandanayo. Ukusuka ephantsi kwentliziyo, vuyisana ngamagama akho amantombazana kunye nabafana abondla ngayo iimvakalelo ezigqatso-uthando. Intombazana yam, ngokukhawuleza ukuba ndivale amehlo am, ndicinga ngawe - Ndiyakhumbula ukunyamezela kwakho kunye nezwi lakho elimnandi. Uyona nto ibaluleke kakhulu ebomini bam, kwaye andiyi kukunika umntu. Ndiyakuthanda, ubutyebi bam! Ungumntu osondele kum mna kweli hlabathi likhulu kwaye ndivuyiswa kukuba ndidibene nawe kwaye ndafumanisa ukuba yintoni uthando lwangempela. Endleleni eya entliziyweni yakho, andiyi kuvalwa yimingcipheko. Ndiyakuthanda kwaye ndivuyiswa ngoluvo lokuba ngelinye ilanga uza kuba ngonaphakade!
Ungumntu osondele kum mna kweli hlabathi likhulu kwaye ndivuyiswa kukuba ndidibene nawe kwaye ndafumanisa ukuba yintoni uthando lwangempela. Endleleni eya entliziyweni yakho, andiyi kuvalwa yimingcipheko. Ndiyakuthanda kwaye ndivuyiswa ngoluvo lokuba ngelinye ilanga uza kuba ngonaphakade! *** Siyakuhalalisela ngomhla we-14 kaFebruwari! Kwaye masibe nomlo suku, ebomini, amaphupha akho aya kuzaliseka, ndiyanqwenela ngokwenene iintyatyambo, uthando kunye nobuhle!
Ndiyathanda Injabulo inqabileyo egcweleyo namhlanje, Namhlanje ndilivila ukupenda imifanekiso. Ndiza kubetha intliziyo Nesikhwama somnqweno, ndiya kukunika kunye neeskese zincinci!
Ukususela ngoFebruwari 14, ndifuna ukukuhalalisa ngeengqungquthela malunga nothando. Ulawula kum mphefumlo wam kwaye ulawulo, Unikwa ngonaphakade, kungakhathaliseki ukuba uhlala phi. Ndiyathanda ukuba ube nesisa kunye nesithando, Ukufumana ukuvisisana othandweni, Ukuphila kwakho, uzele uvuyo, Kwizandla zomnye!
Mfutshane nincoma abantu abathandanayo bathandana ngoFebruwari 14 - i-SMS ehlekisayo kunye neentlanzi ezinemibala emnandi kwi-Valentine's Day
Mhlawumbi, phakathi kwabahlobo bakho nabahlobo abanolwazi kukho abathandi abahlala kude nawe? Mhlawumbi, uya kufuna ukubancoma ngeli holide ngoFebruwari 14. Thumela ii-SMS ezimfutshane kunye nee-valentines ezimnandi kunye nemifanekiso emihle. Namhlanje kulula ukwenza oku - sebenzisa i-Intanethi ngokukhuphela enye yeposididi ebonakalayo kweli khasi. Vumela abahlobo bakho bazi ukuba zabo iimvakalelo zivuyiswa ngabahlobo kunye nabantu abasondeleyo. Ndiyakuvuyela: Thatha ubomi obude, obonwabileyo, Ngoxolo, uvuyo, uthando, iminyaka, inyanga kunye neentsuku! Usuku LukaValentine Ovuyayo, Lonke uthando, ithemba, eligqithiseleyo!
Ngosuku lukaValentine Ndabhala le migca: Ndifuna kuwe, nyana wam othandekayo! Kwaye ukuba ubusuku bukaFebhuwari buphumelele, ngoko uya kuba nendodana nentombi!
Ukusuka kwi-smsok ukuya kwi-Valentine's Day Ihlabathi elimibalabala, iimeko ezintle kakhulu kunye neendwendwe ezikufutshane nabantu bonke, njengethunzi, uthando olukhulu luyomzuzu omhle.
Uvuyiso olumangalisayo kwiSuku lweValentine lwezithandane zothando - Uthando lwamazwi yeholide ngoFebruwari 14
Kungekudala kungekudala kuza kuza iholide ngoFebhuwari, ngo-14, kwaye awuyazi, kungcono njani ukuvuyisana nabahlobo bakho nabathandekayo? Yenza oku ngokubanika amakhadikhadi amnandi, asayinwe ngemigca yothando lomculo. Unqwenela ukuba isibini esithandanayo singaze sahlukane, sisekelane kungekhona nje ngovuyo, kodwa nakwiimeko ezinzima zobomi, uxoxe ngokunyanisekileyo uvuyo lwesiqingatha sabo. Imigca ye-Poetic, ifanelekile ukuvuyiswa ngoSuku lwe-Valentine, uya kufumana kweli phepha. Unokuphinda uzinikele imibongo ebhaliweyo evela kuwe. Unobungqina bokuba luthando ehlabathini Ukwazi ukuphawula wonke uMhlobo womhlobo kwihlabathi ukudibana. Ngoku iintliziyo zothando zakhawuleza zibetha ... kwaye iphupha lakho eliqhelekileyo Liza kuzaliseka ...
Kwaye akukho mbini enhle, kwaye unamandla, ngokungathandabuzekiyo ... Uthando luhlala lufudumele, luyinto engavamile ...
Isithandane esinamandla kunothando ndiyahlulela imibongo yam ... Kwaye ndinqwenela wena othembekileyo kunene, Uthando olumangalisayo! Yenza intliziyo yakho imfudumala Yayo imfudumala, ilungele ukukhanya. Omnye ucinga, akukwenzeka, wena-le mpendulo eyahlukileyo!
Ungumfana omhle kangaka, akunakwenzeka ukukhupha amehlo akho! Ufanele uthandane kwaye njengoko ubona kubaluleke kakhulu ... Ukhwele yonke into encinci, Unomona omhlophe ukhangela wena. Uyabathanda kwaye, mbulela uThixo, Jabule apha kwaye ngoku!
Ubuliso olungileyo kwiSuku kaValentine ngokuthandana nezibini - Iingqungquthela zesiganeko sokuthandana ngomhla kaFebruwari 14
Ngamanye amaxesha ngoFebruwari 14, imimangaliso yangempela eyenzekayo - inesizungu phambi kokuba abantu badibane kwiSonto likaValentine, bawa thandweni, bangaze bahlukane. Amabali amahle othando lwabo axelayo abantwana kunye nabazukulu. Ukuba phakathi kwabahlobo bakho kunye neentsapho zikhona izibini kunye neendaba ezinjalo zothando, ukuba ngoFebruwari 14 babhiyozela isikhumbuzo sokwazisa kwabo, qiniseka ukuba nivuyisana nabathandi beeholide. Banike imibongo kwiSuku lweValentine - thumela uvuyo okanye uthumela ngeposi nge-valentine enhle kunye neebongozo. Namhlanje sonke siyakulibala, Siza kuthenga ikheke, siza kuthulula iwayini, Siya kukhanyisa ikhandlela kwaye siza kunye kunye nawe kunye. Isikhumbuzo sobudlelwane Siza kubhiyozela kunye nawe, Akukho buhlungu, ngokungathandabuzekiyo, Kuba unayo! Ilanga liguqula ihlabathi ngemisebe, Kuya kubakho ukukhanya kunye nesithunzi siya kutshabalala. Le yeholide yethu kunye nawe, Lo ngumhla wethu!
Namhlanje iholide yobudlelwane bethu, ndikhawuleza ukukuhalalisa ukusuka entliziyweni yam. Ndinqwenela ukuba kunye ngaphandle kokuhlukanisa, Njalo qondana ngaphandle kwamagama, Ukuthanda ngokulandelanayo ukuya kwinqanaba le-insanity, Ukuhlala ixesha elide ngaphandle kwama-scandals kunye nokuthengwa kweekhonkco.
Uthandane - yonke into iyinto eyingqungquthela. Amehlo akhanya ngokuzonwabisa ... Kwaye kubini kungcono ukuba ungaboni ngale ndlela, Kodwa uthando alukwazi ukuhanjiswa ngamagama ... Futhi akukho ubuhlobo obunamandla kwihlabathi-kubonakala kuwe, mhlawumbi ngoku ... Oku, ngokwenene, akukho nto inokuthi. Ungavumi ukuba nantoni na ikuvelele!
Isibini esithandekayo singenakufunyanwa, ndijonge kuwe kwaye ndonwabile kwakhona. Ndiyathanda ukuba ungalahlekelani, uBoofire wothando, ngaphezu kweminyaka!
Ninyamekelane, bathande kwaye niphile ngenxa yothando Makhe imiphefumlo iphakame iphiko, Kuya kuba neentsuku eziqhelekileyo. Siyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba uyathokoza kubathandi Izibini ezidweliswe kweli phepha ziya kukunceda ukhethe iinqwenelelo ezilungileyo ngoFebruwari 14 kubahlobo bakho nabahlobo ababathandana. Ekubeni kunemibongo emihle yeembongi ze-classic kunye neprose, kunye ne-SMS emfutshane kubahlobo kunye neentsapho ezikude nawe, kukukhetha ukuba ungancoma njani ukuthandwa ngabanye. Thumela imibuliso kulabo abathandanayo ngomkhosi wokuba baqhelana nabo okanye bafisa ukuba banomdla wokuba bahlukane, bathandane ngaphezu kweminyaka.
Yintoni ongayibonisa ngoFebhuwari 14, 2017 intanda kunye nendoda ethandekayo, intombazana nentombi. Isipho sokuqala sosuku lwabathandwa bonke ngezandla zabo
Indlela yokudweba ivalentine?
Ungenza njani i-valentine yangempela?
Izipho zintanda yakho ngomhla kaValentine, ezenziwe ngezandla
Izibongo ezintle, ezintle kunye ezinobumnene ngoFebruwari 14 ngesiRashiya nesiNgesi
Ndiyakuvuyela ngomhla kaValentine ka-2017 kwisithandwa sakho sithandekayo, indoda, indoda, umhlobo, intombazana ethandekayo - Iimfutshane ezimfutshane, ii-prose ne-valentines eziphambili ngoFebhuwari 14 kubo bonke abahlobo
Indlela yokwenza i-origami ephepheni: intliziyo (ividiyo)
Ukutya: ukondla unina onomama
IHoroscope yeGemini-Mfazi ngoJanuwari 2017
I-Lenten isambatho sesonka
Ukuphucula ukuxilisa iintsana
Indlela yokwenza imemori ikhumbuze yonke into oyifunayo?
Yintoni abantu abangayithandi ngesini?
Ukucwangcisa ngesondo lomntwana ngoFeng Shui
Iindlela kunye nemiski yokunyuka kweenwele ezinqabileyo
Izindlela zokulwa namabala e-pigmentation
Ungamnceda njani umfana ngokubanga?
Isidlo kunye neembotyi kunye namakhowe
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adle ukutya okuqinileyo
I-Catarrhal angina kubantwana: iindlela zokonyango
I-coconut cocktail kunye namajikijolo
Izipho ngeempawu zezodiac: Izibonakaliso zomoya
Isibonelelo sokusinda kwindawo yokuhlala